Global Voices teny Malagasy » Shina : Tsy fahazoana miasa amin’ny alina ho an’ireo cybercafés? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Avrily 2019 5:28 GMT 1	 · Mpanoratra Don Weinland Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia
Nitaky ny ‘’fanapahana ireo cybercafés amin’ny misasakalina’’ ny solombavambahoaka Gao Wanneng noho ny fiakinan-doha maharitra amin’ny Aterineto ho an’ireo tanora Shinoa. Nanambara i Atoa Gao fa ny fiankinan-doha toy izany no mahatonga ny fitomboan’ny ankizy miala amin’ny fianarana sy ny heloka an-tserasera ary nangataka ny Kongresim-bahoaka Nasionaly izy mba handany ny lalàna mametra ny lalao an-tserasera, hoy ny tatitry ny gazety Fiainana Andavanandron’ny Mpiasa .
Nanoratra ilay bilaogera Li Lijun  fa nitondra vazivazy kely tamin’ny rivo-piainana izay matetika matotra dia matotra tao amin’ny Kongresim-bahoaka Nasionaly, fanao isa-taona isaky ny volana Martsa, ny soso-kevitry ny solombavambahoaka Gao.
Niaiky ilay bilaogera Shan Cha  fa tsy hahavita hamaha mihitsy ny olana fototra ny fepetra henjana toy izany, ary tsy isalasalana fa hametraka olana goavana amin’ny asan’ny cybercafé .
Nitatitra i Caijing  fa nisy cybercafé lehibe iray tao an-tanànan’i Chongqing, matiantoka 10.000 Yuan ( na 1000 euros) izay eo ho eo amin’ny ampahatelon’ny tombombarotra isam-bolana ho amin’ity toeram-piasana ity, tamin’ny taona 2005, noho ny fampiharana ny politikan’ny ‘’fanapahana amin’ny misasakalina’’.
Nanamarika ny lahatsoratra tao amin’ny Pesea Gaming Blog  fa hametra tanteraka ny fikojakojana any amin’ireo cybercafé ny fanapahana ny tolotra Aterineto amin’ny misasakalina ka hatramin’ny 8 ora maraina. Nanamafy ny bilaogy fa matetika alaina sy havaozina amin’ny ora vao maraina ny lalao, ny fitaovana ary ny rindrambaiko antivirosy. Manery ireo mpitantana hanao ny fanamboarana mandritra ny ora maha-betsaka ny olona mivezivezy ny fitsipika vaovao.
Nanoratra ny mpandray anjara ao amin’ny Pesea Gaming Blog  hoe :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/08/136630/
 Fiainana Andavanandron’ny Mpiasa: http://lianghui.workercn.cn/contentfile/2010/03/08/031046520235815.html
 Li Lijun: http://blog.qq.com/qzone/153875697/1267889379.htm